Waxyaabihii laga bartay kulankii xalay ay Barcelona guuldarrada dusha u saartay kooxda Liverpool… (Messi oo barbareeyey CR7) – Gool FM
Macalin Ole Gunnar Solskjær oo marmarsiyo cusub u sameeyay bar-bardhicii ay xalay la galeen kooxda Club Bruges
Madaxweynaha Barcelona oo ka hadlay dareenkiisa kaga aadan xiddigooda cusub ee Martin Braithwaite
“Qoyskayga iyo aniga waxaan dooneynaa inaan sii joogno London” – Willian oo markale niyad jabiyay Barcelona
Miyuu qeyb ka noqon doonaa David Silva kulanka Real Madrid kaddib dhaawacii soo gaaray xalay? Guardiola ayaa ka jawaabaya
Shaxda rasmiga ah kulanka Club Brugge iyo Man United ee tartanka Europa League oo la shaaciyay
“Kylian Mbappe waa kan hadda iyo mustaqbalka” – Cristiano Ronaldo
“Lautaro Martínez waa sida Suárez oo kale, waxaana ka rabaa inuu yimaado Barcelona” – Lionel Messi
Jamie Redknapp oo sheegay xiddiga ugu fiican England… (Ma van Dijk, Henderson, Mané mise De Bruyne?)
“Waan ka murugooday in shaqada Barcelona laga eryo Ernesto Valverde” – Lionel Messi
RASMI: Kooxda Barcelona oo la saxiixatay Martin Braithwaite oo noqonaya bedelka Ousmane Dembélé
Waxyaabihii laga bartay kulankii xalay ay Barcelona guuldarrada dusha u saartay kooxda Liverpool… (Messi oo barbareeyey CR7)
Haaruun May 2, 2019
(Barcelona) 02 May 2019. Kooxda Barcelona ayaa guuldarro xanuun badan xalay dusha u saartay naadiga reer England ee Liverpool, waxaana ay kaga soo adkaatay Reds 0-3.
Kulankan oo ahaa lugta hore ee afar dhammaadka Champions League, kaasoo ka dhacay garoonka Camp Nou, ayey Barcelona ku adkaatay saddex gool oo ay kala dhaliyeen Suarez oo 26’daqiiqo daah furay goolsha iyo Lionel Messi oo labo gool raacsaday daqiiqadihii 75’’aad iyo 82’aad.
Haddaba halkaan hoose waxaan ku eegeynaa waxyaabihii laga bartay kulankan xalay dhexmaray kooxaha Barcelona iyo Liverpool ama rikoorradii laga diiwaan geliyey:-
>- Barcelona ayaa noqotay kooxdii labaad ee Champions League ka dhalisa 500 oo gool ama wax ka badan, kaddib Real Madrid oo tartankan ka dhalisay 551 gool.
>- Kaliya Raúl (33) ayaa goolal ka dhaliyey kooxo kala duwan tartanka Champions League, isaga ayaana ka badan Lionel Messi oo 32 kooxood oo kala duwan goolal ka dhaliyey tartankan, waxaana xalay goolkiisii ugu horreeyey uu ugu shubay Liverpool.
>- Liverpool ayaa haatan guuldarro la kulantay kulamo badan oo Champions League xilli ciyaareedkan, waxaana ay guddoomeen 4 guuldarro 11 kulan oo ay ciyaareen, waana in ka badan guuldarrooyinka ay la kulmeen dhammaan xilli ciyaareedyadii hore marka la isku daro tartankan oo ay qaateen 3 guuldarro 38 kulan oo ay dheeleen.
>- Liverool ayaa la dhibtoonaysa guuldarradii ugu cusleyd ee ka soo gaarta Champions League, waxaana guuldarro midaan la mid ah oo 0-3 ah ay kala kulmeen kooxda Real Madrid bishii October ee sanadkii 2014-kii.
>- Lionel Messi ayaa xalay goolkiisii 600-aad tartammada oo dhan u dhaliyey kooxdiisa Barcelona, waxaana goolkiisii ugu horreeyey uu kooxdan Barca u saxiixay 14 sanadood ka hor markaasoo uu ugu shubay kooxda Albacete ciyaar dhacday 01 bishii May sanadkii 2005.
>- Lionel Messi ayey ku qaadatay inuu dhaliyo 600 oo gool oo heerka kooxaha ah xirfaddiisa ciyaareed 683 kulan oo uu saftay.
>- Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo ayaa haatan labaduba dhaliyey 600 oo gool oo heerka kooxaha ah, CR7 waxa uu dhaliyey goolkiisii 600-aad Sabtidii, halka Leo Messi uu saxiixay Arbacadii xalay, waana labada xiddig ee kaliya oo iminka ciyaaraya eegaroomada ku jira oo dhaliya 600 oo gool heerka kooxaha.
>- Lionel Messi waa kaliya ciyaaryahanka labaad ee gool kaga dhaliyay tartanka Champions League saddex kooxood oo kala duwan oo Ingiriis ah hal xilli ciyaareed gudihiis, waxaana uu ka kala dhaliyey Spurs, Man Utd iyo Liverpool, xiddiga labaadna waa Thomas Muller oo isna xilli ciyaareedkii 2013-14 Champions League goolal ka wada dhaliyey kooxaha Arsenal, Man City iyo Man Utd.
>- Lionel Messi ayaa 26 gool kaga dhaliyey Champions League 33 kulan oo uu ka horyimid kooxaha ka socda Waddanka Ingiriiska, ma jiro ciyaaryahan ka badan oo goolal intaa la eg ka dhaliyey kooxo hal waddan ka socda taariikha tartankan, waxaana Leo uu sidaas ku barbareeyey Cristiano Ronaldo oo isna 26 gool tartankan kaga dhaliyey kooxaha ka socda Waddanka Jarmalka.
>- Lionel Messi ayaa gool ka dhaliyey koox kasta oo ka socota Premier League oo uu ku wajahay Champions League, waxaana kooxaha England ka socda uu wadar ahaan ka dhaliyey 26 gool.
>- Lionel Messi ayaa 8 laadadka horta ah (free-kicks) u dhaliyey kooxdiisa Barcelona tartammada oo dhan hal xilli ciyaareed markii ugu horreeysay xirfaddiisa ciyaareed.
>- Kaliya labo kooxood ayaa saddex gool hal kulan kaga dhaliyey kooxda Liverpool oo ay wajaheen tartammada oo dhan xilli ciyaareedkan, waxaana ay kala yihiin Crystal Palace iyo Barcelona.
>- Goolhayaha Barcelona ee Marc-André ter Stegen ayaa shabaqiisa gool ka ilaashaday 7 jeer isagoo kulamada bug-baxa ku ciyaaraya garoonka kooxdiisa ee Camp Nou, waxaana kulamada kale oo uu ku ciyaaray looga dhaliyey kaliya 5 gool.
>-Goolhaye Marc-André ter Stegen ayaa haatan garoonka Camp Nou shabaqiisa gool kaga ilaashaday afar ka mid ah shan kooxood oo Ingiriis ah oo uu ku wajahay tartanka Champions League (Man City, Chelsea, Man Utd iyo Liverpool ayuu gool kaga ilaashaday balse kaliya waxaa kaga dhalisay kooxda Arsenal, waxaana ugu shubay Mohamed Elneny).
>- Xalay waxa ay ku beegnayd markii sanadkii 2013-kii ay Bayern Munich ku garaacday Barcelona garoonka Camp Nou, tan iyo markaasna Barca garoonkeeda guuldarro kuma soo gaarin tartanka Champions League, (01/05/2013 Barca oo ku ciyaareysay garoonkeeda ayaa guuldarro 0-3 kala kulantay Bayern Munich, xalay oo taariikhdu ahayd 01/05/2019 Barca ayaa guul 3-0 isla garoonkan kaga gaartay kooxda Liverpool).
>- Barcelona ayaa haatan guuldarro la’aan ah 32 kulan oo ay ku ciyaartay garoonkeeda tartanka Champions League, 29 kulan guul ayey gaartay, halka 3 kulan ay barbaro gashay.
>- Kooxda Liverpool ayaa ku guuldarreysatay inay hal shuut ama laad oo bartilmaameed toos ah sameyso qeybtii hore ee ciyaartan ay xalay ka horjeedeen Barcelona.
>- Lionel Messi ayaa xalay kulankiisii 100-aad ku soo bilowday safka hore ee Barcelona isagoo xiran calaamadda hoggaaminta ee kabtannimo.
>- Ugu dambeyntiina waxaa la shaaciyey tirada taageerayaashii xalay soo xaadiray garoonka Camp Nou oo daawanayey kulankan dhexmaray kooxaha Barcelona iyo Liverpool, waxaana garoonka fadhiyey 98,299 ruux.
Waxaa isku duway: Haaruun Yuusuf Khasaaro
“Anfield waa garoon aad u adag, dhinaca kale waxaan nasiib ku lahaa goolkii aan dhaliyay” - Messi
"Messi waa LAMA JOOJIYE aad baana uga helaa.".- Jurgen Klopp